Marco Verratti Oo Shidaal Ku Daraya Wararka Xanta Ah Ee Lionel Messi Ee Ku Aadan PSG
Home Wararka Ciyaaraha Maanta Marco Verratti oo shidaal ku daraya wararka xanta ah ee Lionel Messi...
Marco Verratti ayaa noqday ciyaaryahankii ugu dambeeyay ee si cad u muujiya rabitaankiisa inuu ka garab ciyaaro Lionel Messi kooxda Paris Saint-Germain .
Ciyaaryahanka khadka dhexe ayaa ah xubintii shanaad ee ka tirsan PSG ee ka hadla heshiiska suurtogalka ah ee Messi ugu wareegayo kooxda ka dib Angel Di Maria, Leandro Paredes, agaasimaha isboortiga Leonardo iyo tababare Mauricio Pochettino.
Mustaqbalka Lionel Messi ee Barcelona ayaa haatan isku dheelitiran. Wuxuu leeyahay go’aan weyn oo uu gaarayo dhamaadka xiliciyaareed kaan, waxayna wararku sheegayaan in Manchester City ay tartan ugu jirto saxiixiisa.
Marco Verratti ayaa haatan sheegay inuu jeclaan lahaa inuu Lionel Messi kula ciyaaro Barcelona maadaama ay fursad u siineyso inuu arko Neymar iyo xiddiga reer Argentine oo mar kale isku biiraya. Wuxuu la hadlayey Kanaalka + markuu yiri:
“Dabcan, waxaan jeclaan lahaa inaan la ciyaaro Messi. Inaan kooxda ku yeesho waxay noqon laheyd wax aad u wanaagsan, waa wax kale oo kubada cagta ay i siin laheyd. Waxay noqon laheyd wax la yaab leh inuu nala joogo, hadiyad kale oo aan ka helayo kubada cagta.
PSG ayaa ka mid ah kooxaha sida firfircoon loola xiriirinayay Lionel Messi waxayna ku dadaalayaan inay ku qanciyaan xiddiga Barcelona inuu ku biiro. Neymar ayaa sidoo kale lagu soo waramayaa inuu isku dayayo inuu soo jiito xiddiga reer Argentina Paris.
Previous articleFaafaahin dheeri ah Heshiiska Chelsea la gaartay Jerome Boateng
Next articleReal Madrid oo ka fiirsaneysa iibinta Raphael Varane madaama qandaraaskiisu hoos u dhacayo.